Yallumbee Beach Studio - Balnarring Beach - I-Airbnb
Yallumbee Beach Studio - Balnarring Beach
110 okushiwo abanye
Balnarring Beach, Victoria, i-Australia
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Ann
U-Ann Ungumbungazi ovelele
I-Yallumbee Beach Studio iyindawo enhle, evulekile yokubaleka imizuzu emi-5 nje ukuya e-Balnarring Beach eNhlonhlweni yaseMornington. Isitudiyo siyindawo esanda kulungiswa, evalelwe endaweni eyinhloko, enikeza indawo yakho yokubiza ikhaya ngezinzuzo ezengeziwe zedekhi enelanga, ukufinyelela echibini kanye nohhavini we-pizza obaswa ngezinkuni kanye nendawo ye-BBQ. Indawo eyimfihlo eqhele ngemizuzu eyi-10 kuye kweyi-15 kuphela enhliziyweni yesifunda sewayini saseMornington Peninsula, i-Yallumbee Beach Studio iyindawo ekahle yokuphumuza umoya futhi uphumule.
I-Yallumbee Beach Studio iyisitudiyo esisanda kulungiswa, esigcwele ukukhanya
- inakho konke okudingayo ukuze uphumule ogwini lolwandle. Ibekwe ekugcineni kwendawo yokuhlala ethule ye-cul-de-sac, izivakashi zinokufinyelela kwangasese esitudiyo esifaka indawo yokulala, yokuhlala neyokugeza.
Lesi situdiyo sifika sihlome ngombhede olingana nendlovukazi, ilineni elisezingeni eliphezulu namathawula, i-air-conditioned comfort (split system), 50” Smart TV, Netflix kanye ne-JBL soundbar enamandla eBluetooth, ikhishi elimiswe kahle. Yize zingekho izindawo zokupheka, uzothola ifriji, imicrowave, itoaster, iketela nomshini wekhofi we-nespresso. I-sundeck ethandekayo ivulekela engadini kanye ne-BBQ engaphansi kanye nohhavini we-pizza obaswa ngokhuni ongasetshenziselwa ukusetshenziswa. Lesi situdiyo siyindawo yokuhlala yodwa eseduze nekhaya lethu, ekwazi ukufinyelela engadini enhle, ichibi elingaphansi komhlaba kanye nendlela yokufinyelela ogwini. Indawo yokupaka esizeni iyatholakala.
Sicela uqaphele - AKUKHO OKUNGAGAMA esitudiyo, noma yiziphi izinkomba zokubhema zizoba nenkokhelo yokuhlanza engu-$250.
Sicela futhi uqaphele ukuthi sigcina izidleke zezinyosi ezimbili ezincane ngemuva kwengadi yethu - amantombazane ahlala wodwa futhi amatasa esiza ukusindisa iPlanethi!!
5.0 out of 5 stars from 110 reviews
5.0 · 110 okushiwo abanye
I-Yallumbee Beach Studio itholakala ebhishi elihle i-Balnarring e-Victoria's Mornington Peninsula, ibanga elingaphezu nje kwehora ukusuka eMelbourne CBD kanye nemizuzu engama-90 ngemoto usuka esikhumulweni sezindiza sase-Melbourne's Tullamarine.
I-Balnarring Beach ifinyelelwa kalula eduze kwe-Monash noma i-Eastern Freeways & Peninsula Link, noma umgwaqo omuhle osogwini ogona i-Port Phillip Bay.
Ukuhamba kancane unqamule i-Merricks Creek usuka esangweni lethu elingemuva, udlule endleleni yethu eyimfihlo yasehlathini futhi wehle ngomzila oyisihlabathi kukuyisa e-Balnarring Beach ethule, elinganiselwe ngo-2006 'njengebhishi lase-Australia elihlanzekile kakhulu'.
I-Balnarring Village iyimizuzu emibili nje yokushayela umgwaqo, lapho uzothola khona konke ongase ukudinge ngesikhathi uhlala... isuphamakethe, ikhemisi, izindawo zokudlela, amathilomu, ukudla okuthengiswayo nokunye.
Working mum from Mornington Peninsula, married with 3 adult children. Enjoy travelling, cooking, walking, reading, socialising
I-Yallumbee Beach Studio iyindawo yangasese endaweni yethu. Sihlala kule ndawo, ngakho sizotholakala uma unemibuzo noma uma kuphakama izinkinga.
UAnn Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Balnarring Beach namaphethelo